RW Rooble ayaa sheegay in uu la fadhiisan doono musharixiinta mucaaradka ee ka walaacsan… – Hagaag.com
RW Rooble ayaa sheegay in uu la fadhiisan doono musharixiinta mucaaradka ee ka walaacsan…
Ra’iisal Wasaaraha Somalia, Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inuu la fariisan doono Musharaxiinta Mucaaradka, ee ka walaacsan Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka qaarkood.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa tilmaamay in mas’uuliyad culus ay tahay xilka oo la qaado, diyaarna uu u yahay inuu qanciyo xubnaha ka biyo diidan Guddiyada Doorashooyinka.
“Xilka in la qaado waa mas’uuliyad culus, waxaa jira rag walaalahey ah oo aan si fiican u garanayo oo musharaxiin ah oo cabasho ka keenay Guddiyada Doorashooyinka, waxa aan diyaar u ahay in aan kala fariisto, si aan uga qanciyo tabashadooda.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha oo ka hadlayay munaasabad lagu sagootinayay wafdigiisa, oo xalay lagu qabtay Magaalada Baydhabo.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu soo gaaro Magaalada Muqdisho, mana cadda inuu ka qaybgeli doono Shirka Musharaxiinta Mucaaradka uga socda Muqdisho iyo in kale. Shirka ayaana la fillayaa in gelinka dambe ee maanta la soo geba-gabeeyo.
Shirkan oo saamayntiisa yeeshay ayaa ah mid markii horeba lagu cadaadinayay Villa Somalia, si wax kaga bedesho Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka qaarkood, oo ay Musharaxiinta Mucaaradka u arkaan in ay ka tirsan yihiin Hay’adda Nabad Suggida iyo Shaqaalaha Rayidka ee Xafiisyada Madaxda.